समाचार - होल ओपनर, होल आरी वा होल आरा पनि भनेर चिनिन्छ, आधुनिक उद्योग वा ईन्जिनियरि inमा सर्कुलर प्वालहरू मसिiningको लागि एउटा विशेष परिपत्रक स saw्केत गर्दछ।
होल ओपनर, होल आरी वा होल आरा पनि भनेर चिनिन्छ, आधुनिक उद्योग वा ईन्जिनियरि inमा सर्कुलर प्वालहरू मशीनिंगको लागि विशेष गोलाकार आरीलाई बुझाउँछ। यो अपरेट गर्न सजिलो छ, बोक्नको लागि सुविधाजनक, सुरक्षित र व्यापक रूपमा प्रयोग। तांबे, फलाम, स्टेनलेस स्टील, plexiglass र अन्य प्लेटहरूको कुनै घुमावदार सतहमा गोलाकार प्वाल, वर्ग प्वाल, त्रिकोणीय प्वाल, सीधा रेखा र घुमाव काट्न यो सुविधाजनक छ जब यो साधारण इलेक्ट्रिक ड्रिलमा स्थापना हुन्छ।
सर्कलहरूका बिभिन्न आकारका अनुसार, ट्यापरको बिभिन्न अपर्चर र विशिष्टता हुन्छ। उही समयमा, प्वालको गहिराइ अनुसार, तिनीहरू मानक प्रकार र गहिरो लोड प्रकारमा विभाजित हुन्छन्। तिनीहरू इलेक्ट्रिक हात ड्रिल, प्रभाव ड्रिल, रकर ड्रिल र अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणहरूमा स्थापित छन्।
त्यहाँ दुई साझा प्रकारहरू छन्:निश्चित व्यास र चर व्यास (विमान प्रकार)। भ्यारीएबल व्यास होल ओपनर प्राय: इनडोर र आउटडोर सजावटको लागि प्रयोग गरिन्छ।
फिक्स्ड व्यास होल ओपनर, त्यहाँ साधारण प्रकार, प्रभाव प्रकार, पानी-कूल्ड प्रकार, जसमा पानी-कूल्ड प्रकार सामान्यतया भित्ता खोल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, उच्च दक्षता र सुन्दर खोल्नको साथ।
सामग्री वर्गीकरण अनुसार:द्वि-धातु छेद ओपनर / द्वि-धातु छेद देखा, सीमेन्ट कार्बाइड होल आरा, हीरा प्वाल देखा। बिभिन्न सामग्रीहरू बिभिन्न सामग्री काट्न प्रयोग गरिन्छ। सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने बिमेटालिक सा हो। कडा मेटल सामग्रीका लागि सिमेन्ट कार्बाइड सिफारिस गरिएको छ, र हीरा गिलास, कार्बन फाइबर, सिरामिक र अन्य कमजोर सामग्रीहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ।
प्वाल ओपनरका सामानहरूमा मुख्यत:समर्थन ह्याण्डल, वसन्त, ड्रिल बिट, आदि। समर्थन ह्यान्डल सामान्य भागहरूमा पर्दछ। बिभिन्न प्वाल व्यासको साथ हेरिएको प्वाल समर्थन ह्याण्डलको दुई विशिष्टताको साथ सुसज्जित छ। १ and र mm२ मि.मी. बीचको प्वाल व्यास एउटा स्पेसिफिकेसन हो, र mm२ मिमी भन्दा ठूलो प्वाल प्वाल एक विशिष्टता हो।
प्वाल गरीएको सामानहरूमा मुख्यतया समावेश:समर्थन ह्याण्डल, वसन्त, ड्रिल बिट, आदि। समर्थन ह्यान्डल सामान्य भागहरूमा पर्दछ। बिभिन्न प्वाल व्यासको साथ प्वाल ओपनर समर्थन ह्यान्डलको दुई विशिष्टताको साथ सजिलो हुन्छ। १ and र mm२ मि.मी. बीचको प्वाल व्यास एउटा स्पेसिफिकेसन हो, र mm२ मिमी भन्दा ठूलो प्वाल प्वाल एक विशिष्टता हो।
उच्च गति इस्पात उच्च कडाई, उच्च पोशाक प्रतिरोध र उच्च गर्मी प्रतिरोध संग एक उपकरण उपकरण स्टील हो। उच्च गति इस्पात मुख्यतया जटिल पातलो किनार र प्रभाव प्रतिरोधी धातु काट्ने उपकरणहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछ, साथ साथै उच्च तापमान असर र चिसो एक्स्ट्रुजन यसको राम्रो प्रक्रिया प्रदर्शन र शक्ति र कडाईको राम्रो संयोजनको कारण मर्दछ।
उच्च गति इस्पात टेपर एक प्रकारको उद्घाटन उपकरण हो जुन उच्च-स्पीड इस्पातले बनेको हुन्छ, जुन मुख्यतया धातु प्लेटहरू वा पाइपहरूमा प्वालहरू खोल्न प्रयोग गर्दछ। यो प्वाल खोल्नु अघि केन्द्र पोजिशनिंग प्वालको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि द्वि-धातु होलको साथ आवश्यक प्वाल व्यास खोल्नको लागि देखा पर्‍यो।
त्यहाँ विभिन्न खालका खालका सलाखाहरू छन्। अब बजार (सामान्य) विशेष पातलो फलामको शीट, (व्यावहारिक प्रकार) विशेष खुला पातलो स्टेनलेस स्टीलमा विभाजित गरिएको छ। (मध्यम ग्रेड) विशेष खुला स्टेनलेस स्टील। (उच्च ग्रेड प्रकार) विशेष खुला स्टेनलेस स्टील (स्टील प्लेट मोटाई २ सेमी भन्दा बढी सम्म पुग्न सक्दछ)।
दोस्रो: बिमेटेलिक होल ओपनर शीट फलाम, काठ र प्लास्टिक प्लेट खोल्न प्रयोग गरिन्छ।
तेस्रो, उच्च गति इस्पात ट्याप होल ओपनर र एलोय ट्यापरको प्रयोग समान छ। पोइन्टहरू: सामान्य, मध्यम ग्रेड, उच्च ग्रेड, पूर्ण ग्राइन्डिंग, औद्योगिक ग्रेड।
अन्तमा, मिश्र ट्यापर इस्पात प्लेटको लागि उपयुक्त छ र स्टिल पाइपको लागि उच्च स्पीड स्टील ट्यापिंग मेशिन उपयुक्त छ।
6542 उच्च गति स्टील
सुविधाहरू: कम भ्यानिडियम सामग्री (१%) र उच्च कोबाल्ट सामग्री (%%)। कोबाल्ट र डुले कार्बन यौगिकहरू मेटिनिक्समा शान्त पार्न र तताउने समयमा बढी विघटन गर्न सक्दछ, र उच्च म्याट्रिक्स कठोरता प्रयोग गर्न प्रतिरोध क्षमता सुधार गर्न।
कठोरता: यस प्रकारको उच्च गति इस्पातसँग राम्रो कडाई, थर्मल कठोरता, प्रतिरोध क्षमता र पीस क्षमता छ। तातो उपचार को कडाई 67-70hrc पुग्न सक्छ, तर केहि विशेष गर्मी उपचार विधिहरु 67-68hrc कठोरता प्राप्त गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ, जसले काटने को कार्य सम्पादन गर्दछ (विशेष गरी अन्तर्देशीय काट्ने) र प्रभाव कडाई मा सुधार।
अनुप्रयोग: कोबाल्ट उच्च गतिको इस्पातलाई काटि tools टूलका विभिन्न प्रकारका बनाउन सकिन्छ, जुन मेशिन सामग्रीहरूमा गाह्रो बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको राम्रो पिसि performance प्रदर्शनको कारण, यो जटिल काटि tools उपकरणमा बनाउन सकिन्छ, जुन विश्वमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि चीनमा कोबाल्ट श्रोतको अभावका कारण कोबाल्ट उच्च-स्पीड स्टिलको मूल्य एकदम उच्च छ, जुन साधारण उच्च-स्पीड स्टिलको भन्दा 5--8 गुणा छ।
पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संरक्षण सामग्री, कुनै प्रदूषण छैन।